उद्योग नवीकरणमा कडाई नगर
लकडाउनका कारण अहिले मुलुकभर व्यावसायिक गतिविधि ठप्प छन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण आफू बच्ने कि व्यवसाय बचाउने भन्ने चिन्तामा निजी क्षेत्र छ । सरकारलाई बुझाउने करमा केही राहत पाए पनि बैंकको ब्याज र त्योभन्दा ठूलो कुरा कर्मचारी तथा मजदुरको तलब व्यवस्थापन निजी क्षेत्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ । यस्तो बेलामा उनीहरूले राज्यको साथ र सहयोग खोज्नु कुनै अनौठो होइन र यसलाई स्वाभाविक र सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ ।
अर्थतन्त्र बचाउन राष्ट्रिय संकल्प
मुलुकको अर्थतन्त्रमा कोरानाका कारण एकपछि अर्को चुनौती थपिएका बेला संघीय सरकार जेठ १५ मा ल्याउने बजेटको तयारीमा छ । त्यसलगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि बजेट ल्याउनेछन् । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा संघीय संसद्को बैठक नै कसरी बस्नसक्ला भन्ने अन्योल एकातिर छ भने अर्कोतिर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान सरकारले नै बजेट ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने आशंका पनि छ । सिंगो मुलुक कोरोनाभाइरससँग जुधिरहेका बेला संघीय सरकारको ध्यान यसको रोकथाम र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा हुनुपर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको महत्वाकांक्षा र निरंकुश प्रवृत्तिका कारण मुलुक दुर्घटनाउन्मुख छ ।
बालबालिकालाई कुलतबाट बचाऔं
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण मुलुकभर लकडाउन छ । यो बेला सबैजना घरमै बसेका छन् भने इन्टरनेट नै समय कटाउने सबैभन्दा ठूलो सहारा बनेको छ । लकडाउनको समयमा इन्टरनेटको प्रयोग उच्च भइरहेको र यसले ब्यान्डविथमा पनि चाप बढिरहेको सेवा प्रदायकहरूको भनाइ छ । तर, इन्टरनेटको उपयोगसँगै दुरूपयोग पनि बढिरहेको छ र यसबाट कतिपय बालबालिकामा कुलत समेत देखिएको पाइन्छ । एक संस्थाले यही बेला गरेको एक सर्वेक्षणले पनि मानिसहरू लकडाउनको समयमा अधिक समय इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको र त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा पोर्न साइटमा व्यस्त रहेको देखाएको छ । निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो ।
मुलुकमा रोजगारदाता र मजदुर पक्ष यतिबेला आमनेसामने भएका छन् । दुबैलाई आमने सामने गराएर भिडन्तको वातावरण बनाउन प्रमुख भुमिका यतिखेर सरकार आफैले खेलेको छ । लकडाउन अवधिको तलब ५० प्रतिशत कटौती गर्ने रोजगारदाताका तीन प्रमुख संगठनको निर्णय बाहिरिन नपाउँदै मजदुर युनियनहरूले विरोध जनाए । दुवै पक्षबीच समन्वय र समझदारीको भूमिकामा रहनुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अलमलमा छ । यसैले लकडाउन अवधिको तलबकै विषयमा श्रम विवाद चर्कने परिस्थिति सिर्जना हुनुअघि नै सरकारले मध्यमार्गी भूमिकामा रहेर निर्णय गर्नु जरुरी देखिन्छ । एकातिर कोरोनाभाइरसका कारण आर्थिक क्षेत्र तहसनहस हुने र अर्कोतर्फ श्रम विवाद पनि बढ्ने परिस्थिति सिर्जना हुने हो भने मुलुकको लागी झनै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
सरकारबाट केही महिनाअघि हटेको संघीय समाजवादी फोरम टुक्र्याउन उनले राज्यको साधनस्रोतको दुरूपयोग गरे । संघीय संसदका दुई सांसद तथा हालैमात्र सेवानिवृत्त भएका प्रहरी प्रमुखलाई प्रयोग गरेर जनकपुरबाट समाजवादी फोरमका एक सांसदलाई काठमाडौं ल्याएर थुनियो, भोलिपल्ट उनी पार्टीको सम्पर्कमा आए । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा सांसद सुरेन्द्र यादवलाई जनकपुरबाट जवर्जस्ती उठाएर काठमाडौं ल्याइएको र उनलाई प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको घामजस्तै झर्लंग भइसकेको छ ।
तेस्रो चरण प्रवेशपछिका चुनौती
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) लाई चार चरणमा विभाजन गरेको छ । जसअन्तर्गत अन्य देशबाट आएका संक्रमित मुलुकभित्र देखिनुलाई पहिलो चरण भनिन्छ भने दोस्रो चरणअन्तर्गत विदेशबाट आएका व्यक्तिबाट (आफन्त र नजिकका नातेदार)मा सर्ने अवस्थालाई बुझिन्छ । यस्तै, विदेश पनि नगएको र विदेशबाट आएका व्यक्तिसँग सीधै सम्पर्कसमेत नभएको तर समुदायमा फैलिएको अवस्थालाई तेस्रो चरण भनिन्छ । अन्तिम अर्थात चौथो चरण भनेको महामारी देशभर फैलिएको अवस्थालाई भनिएको छ ।
विद्रोहलाई निम्तो नदेऊ
मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार ल्याएका दुई अध्यादेशलाई लिएर मुलुकभित्र तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । पार्टीबाहिरमात्र नभइ सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पनि प्रधानमन्त्रीको रवैयाको आलोचना भइरहेको छ । मुलुक एकजुट भएर कोरोना नियन्त्रणका लागि अघि बढ्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्रीको यस कदमले मुलुकको प्राथमिकता के हो भन्नेमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कारविपरीत चालेका यस्ता कदमले संविधानको समेत धज्जी उडाइरहेको छ भने यसलाई बिजुली गतिमा स्वीकृत गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाका सन्दर्भमा पनि प्रश्न उठेका छन् ।
यतिबेला नेपालमात्र नभइ सम्पूर्ण विश्व कोरोनाभाइरस महामारीबाट जोगिन संघर्षरत छ । सबैजसो राज्यका प्राथमिकता भनेकै कोरोनाभाइरसबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउनमा केन्द्रित छन् । यसैले दैनिक प्रशासनका सामान्य कामबाहेक अन्य निर्णय गरिँदैन । तर, नेपाल भने यसमा अपवादमा परेको छ । नेपालमा कोरोना संक्रमणले महामारी रूप लिनै नसक्ने भविष्यवाणी गरेका प्रधानमन्त्रीले गरेका केही निर्णयले कोरोनाविरुद्ध मुलुकले लडिरहेको लडाइँ र मुलुकभर जारी लकडाउनलाई समेत उपहास गरेको छ । राज्यको प्राथमिकतामा दुई यस्ता अध्यादेश परेका छन् कि जसभित्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको सरकारको नियत छर्लङ्ग देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीसँग गम्भीरताको अपेक्षा
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)का कारण यतिबेला विश्वमै मानव जातिले अकल्पनीय संकट बेहोरिरहेका छन् । यस भयावह महामारीले अझै कतिको ज्यान लिने हो र कहिले यसविरुद्धको खोप तथा उपचार पत्ता लाग्ने हो भन्ने पनि टुंगो छैन । यसैले सम्पूर्ण विश्व यतिबेला त्रासमा छ र संक्रमण फैलिन नदिन उत्तिकै गम्भीर पनि छ । सुरुवाती दिनमा केही हेलचेक्र्याइँ गरिरहेका मुलुक पनि पछिल्ला दिनमा भने यसको नियन्त्रणका लागि निकै संयमित र गम्भीर भएर लागिपरेका छन् ।
प्रहरीको व्यवहार सुधार
लकडाउनको समय थपिँदै जाँदा सर्वसाधारणमा उकुसमुकुस बढ्दैछ । त्यसैले कोही कामबिनै पनि बाहिर निस्किरहेका छ भने कोही अत्यावश्यकीय काममा निस्किँदा पनि प्रहरी कारबाहीमा परिरहेका छन् । केही दिनयता सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि गरेको दुव्र्यवहार एकपछि अर्कोगरी सार्वजनिक भइरहेको छ । यसले एकातर्फ प्रहरीप्रति जनआक्रोश चुलिँदो छ र अर्कोतर्फ प्रहरी मेरो साथी भन्ने सुन्दर अभियानको पनि धज्जी उडाइरहेको छ । अस्पतालबाट फर्किंदै गरेका चिकित्सक तथा औषधि किनेर फर्किएका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले गरेको
सरकारी नियुक्तिभित्र लुकेको नियत
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सुनाउन बिहीबार नै कुर्ने गरेका छैनन् । जुन दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्यो सोही दिन फेसबुक लाइभमार्फत निर्णय सुनाउनु आम जनताको सूचनाको हकप्रतिको सम्मान पनि हो । यतिमात्र नभइ ‘मन्त्रिपरिषदका निर्णय परिपक्व हुन २४ घन्टा पुग्नुपर्छ’ भन्ने परम्परावादी मान्यता बिघटित गर्दै पूववर्ती सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको गल्ती उनले सुधार गरेको भन्न सकिन्छ ।
अनौपचारिक श्रमिकको ख्याल गर
श्रमशक्ति सर्भेक्षणअनुसार मुलुकको अनौपचारिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण रोजगारयोग्य उमेरका ६२.२ प्रतिशतले रोजगारी पाइरहेको देखिन्छ । कुल जनसंख्या २ करोड ९० लाख रहँदा गरिएको अध्ययनमा काम गर्नसक्ने जनसंख्या २ करोड ७ लाख अर्थात ७१.५ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले जनसांख्यिक लाभका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रका बारेमा कहिले सोच्ने ?
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को चर्चा हुँदा विश्वव्यापी रूपमा पहिले व्यक्तिको स्वास्थ्य र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ भने त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र र अन्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्छन् । हुन पनि ‘बाँचे संसार देख्न पाइन्छ’ भन्ने उखान पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । यसैले कोरोनाभाइरसको ‘चेन ब्रेक’ गरेर यसको संक्रमण फैलिन नदिनु र संक्रमितहरूको राम्रो उपचार व्यवस्थामा नै अहिले सम्पूर्ण विश्व एकमत छ । यद्यपि, संक्रमणका सन्दर्भमा जति सावधानी जरुरी छ त्यति नै जरुरी आसन्न विकराल आर्थिक संकटप्रति चनाखो हुनु आवश्यक छ । कोरोनाले भोलिका दिनमा ल्याउने ठूलो आर्थिक संकट, गरिबी तथा त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने अनेकौं सामाजिक समस्याजस्ता विषयमा अहिले संवेदनहीन बन्न सकिँदैन । यसैले अर्थतन्त्रको गतिलाई सावधानी र सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
एनसेल प्रकरणको सन्देश
पछिल्लो चार वर्ष सधैँजसो बहस र विवादको केन्द्रमा रहेको बहुचर्चित कर विवादको अन्ततः अन्त्य भएको छ । वैदेशिक लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा भएको लाभको नेपालले पाउनुपर्ने राजस्व अर्थात पुँजीकत लाभकरसम्बन्धी यो विवादको अन्त्य हुनु नेपालको कर प्रशासन, वैदेशिक लगानीकोसँगै समग्र आर्थिक क्षेत्रका लागि सुखद् सन्देश हो । यो विवादको निरूपणले भविष्यमा आउने यस्ताखाले समस्याका लागि नजिरमात्र स्थापित गरेको छैन कि ट्याक्स हेभन मुलुकमा हुने गुप्त कारोबार पनि स्थानीय कानुनअनुसार करमुक्त छैनन् भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा गएको छ । कर प्रशासन र सरकारले खुट्टा छाडिसकेको तथा राजनीतिज्ञहरू बिक्री हुने जोखिम रहेको यो विवादमा नेपालका पूर्वप्रशासकहरू, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमले खेलेको रचनात्मक भूमिकाको भने जति प्रशंशा गरे पनि कमै हुन्छ ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सावधानी अपनाऔं
सरकारले कोरोना संक्रमण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको घोषणा गरेको एक सातापछि तीन नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । पर्साको वीरगन्जस्थित छपकैयाको मस्जिदमा बसेका तीन जना पुरूषमा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ । नेपालभित्रै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक संक्रमितबाट अर्कोमा रोग सरेको घटनाले सर्वत्र त्रास उत्पन्न सिर्जना गराए पनि त्यसयता कुनै पनि संक्रमित फेला परेका थिएनन् । नेपालको अवस्था विस्तारै सामान्य बन्दै गइरहेको बेला शनिबार सार्वजनिक भएको र आइतबार पुष्टि भएको वीरगन्ज घटनाले परिस्थिति जटिल रहेको देखिन्छ । वीरगन्जको छपकैयास्थित मस्जिदमा शंकास्पद रूपमा रहेका २१ जनाको परिक्षण गर्दा त्यसमध्ये तीन जना वर्ष ३७, ५५ र ४४ का पुरूषमा कोरोना संक्रमण पाइएको देखिन्छ ।